Usizo oluphuthumayo lwabashayeli beBolt
Ukuthumela isexwayiso esiphuthumayo esikhungweni Sokuphendula Esiphuthumayo saseNamola ngohlelo lokusebenza lweBolt Driver
Inkinobho ye-SOS ivumela abashayeli beBolt ukuthi bathumele isexwayiso sesikhathi sangempela esikhungweni sikazwelonke sokuphendula ngezimo eziphuthumayo eNamola esimweni esingavamile sesimo esiphuthumayo noma sesehlakalo ngesikhathi sohambo lweBolt. Uma seyenziwe yasebenza, ukwakheka nemodeli yemoto yakho, ipuleti lelayisense, indawo yokuhlala kanye nolwazi lohambo kuzokwabiwa nomhlinzeki osebenza ngokuzinikela we-Namola Response Center ozokuxhumanisa nosizo oluphuthumayo esikhundleni sakho.
Uyisebenzisa kanjani inkinobho ye-SOS ku-Bolt Driver App
Inkinobho ye-SOS itholakala phezulu kwesikrini sohlelo lwakho lokusebenza lomshayeli we-Bolt (ngakwesobunxele samadivayisi we-Android nelungelo le-IOS
Uzodinga ukubamba inkinobho ye-SOS phansi imizuzwana emi-3.
Izokuqondisa esikrinini esithi "Do you want to trigger an emergency alert?" bese ucindezela "Yes, Emergency".
Linda opharetha weNamola ukuthi akubize. Phendula ifoni yakho uma kungenzeka bese unikeza opharetha weNamola imininingwane yesimo esiphuthumayo, kufaka phakathi ukuqinisekisa indawo.
Ithiphu Yezimo Eziphuthumayo: Uma ungaphenduli izinombolo ezingaziwa, hlola inkinobho ye-SOS ku-Bolt Driver App yakho bese ugcine inombolo yesikhungo sokulawula seNamola ukuze wazi ukuthi yiNamola ekushayelayo
Uma ungakwazi ukukhuluma, i-Namola Operator izokuthumela Impendulo Yezikhali endaweni yakho. Uma kungenzeka, hlala endaweni efanayo ukuze Impendulo Yezikhali ikuthole
Ithiphu Ephuthumayo: Ukuphendula ifoni yakho ngemuva kokucindezela inkinobho ye-SOS kuhlelo lokusebenza lwe-Bolt Driver, noma ngabe awukwazi ukukhuluma, kungasiza i-Namola Operator ngemininingwane ukuze ikusize usheshe. Uma ungakwazi ukukhuluma -faka ifoni yakho kwisimungulu ukuze sizwe okwenzekayo ngemuva noma siphendule opharetha imibuzo ngo- "Yebo" noma "Cha".
Umshayeli weBolt kufanele acindezele nini inkinobho ye-SOS?
Endabeni yesimo esiphuthumayo.
UNamola uzokuthumela Impendulo Yezikhali uma kukhona usongo empilweni yakho noma empahleni yakho (noma uma singakwazi ukukuthola). INamola ingakuthumela futhi noma yibaphi abaphenduli bomphakathi esimweni esiphuthumayo, njengamaphoyisa, i-Ambulensi, ezomlilo nezokusindisa kanye namaphoyisa omgwaqo
Uyacelwa ukuthi uqaphele: Ngenkathi silawula izikhathi zethu zokuphendula ezihlomile, asinakulawula izikhathi zokuphendula zabaPhenduli Bomphakathi. Sizobalandela njalo, ukuqinisekisa ukuthi baphendula ngokushesha okukhulu.
Inkinobho ye-SOS ku-Bolt Driver App ngeke ikwazi ukukusiza nge:
Imibuzo ye-akhawunti. IBolt izokwazi ukukusiza ngalokhu. Ungangena ngemvume kuhlelo lwakho lokusebenza lweBolt Driver noma uvakashele esinye seZikhungo Zokushayela esiseduzane nawe.
Uhambo olungakhokhelwa. Abasebenza eNamola ngeke bakwazi ukusiza ngabagibeli abangakhokheleli uhambo lwabo. Uzodinga ukubika lokhu kuBolt ngeBolt Driver yakho bese uya Emaphoyiseni uyovula icala.